၁။ ရူးသွပ်မှု မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါ အချစ်မဟုတ်တော့ဘူး။
Pedro Calderon de la Barca (စပိန် ပြဇာတ်ဆရာ ၁၆၀၀-၁၆၈၁)
၂။ “Valentine လောက်ကြီးမြတ်တဲ့ သူတော်စင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။”
Ogden Nash (အမေရိကန် ကဗျာဆရာ ၁၉၀၂-၁၉၇၁)
၃။ မင်းအတွက်ပါဆိုတဲ့ ကိုယ့်အချစ်တွေအားလုံးကို သယ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင် ရာနဲ့ချီတဲ့နှလုံးသားလည်း နည်းသေးတယ်။
၄။ “ပင့်သက်ရှိုက်သံ အခိုးအငွေ့တွေနဲ့ အလျှင်အမြန်ကူးလူးမှုဟာ အချစ်ဖြစ်တယ်။”
“Love isasmoke made with the fume of sights.”
William Shakespeare (အင်္ဂလိပ် ကဗျာဆရာ၊ ပြဇာတ်ရေးဆရာ၊ သရုပ်ဆောင် ၁၅၈၂-၁၆၁၆)
၅။ ကိုယ်နဲ့အတူ ကြီးပြင်းပါ။ (အိုးအောင်မင်းအောင် ပေါ့။) အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရမယ်။
Robert Browning (အင်္ဂလိပ် ကဗျာဆရာ၊ ပြဇာတ်ရေးဆရာ ၁၈၁၂-၁၈၈၉)
၆။ အချစ်ဆိုတာ လူနှစ်ယောက် ပါဝင်ကစားနိုင်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံး နိုင်နိုင်တဲ့အရာ။
Eva Gabor (ခေတ်ဆန်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရေပန်းစားသူ၊ အမေရိကန် မင်းသမီး ၁၉၁၉-၁၉၉၅)
၇။ အချစ်စစ် ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ပြီးဆုံးရိုး ထုံးစံမရှိဘူး။
Richard Bach (အမေရိကန် စာရေးဆရာ ၁၉၃၆-၁၉၉၉)
၈။ အချစ်ဆိုတာ ခံစားမှုကဗျာ။
Honore de Balzac (ပြင်သစ် ၀တ္ထုရေးဆရာ၊ ပြဇာတ်ရေးဆရာ ၁၇၉၉-၁၈၅၀)
၉။ အချစ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်သား အရူးထခြင်းပါပဲ။
Paul Valery (ပြင်သစ် ကဗျာဆရာ၊ အက်ဆေးရေးသူ၊ တွေးခေါ်ပညာရှင် ၁၈၇၁-၁၉၄၅)
၁၀။ ငါ့နှလုံးသားကို မင်းဆီအပ်နှင်း၊ မင့်နှလုံးသားလည်း ပြန်ပေးပါ။ ဒို့နှလုံးသားတွေကို အတူတွဲ သော့ခတ်သိမ်းကြမယ်လေ။ ပြီးရင်တော့ သော့ကို ၀ဲပလိုက်ပါလေ။
“My heart to you is given; Oh, do give yours to me; We’ll lock them up together, And throw away the key.”
အသက်ပါလှတဲ့ အံ့ဖွယ်ရုပ်တု တစ်ခုကို Wellesley ကောလိပ်မှာ ထားရှိထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ရုပ်တုဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက် အိပ်တစ်ဝက်လမ်းလျှောက်နေပုံ ဖြစ်ပြီး သူ့ချည်းသက်သက်တော့ ဘာမှအပြစ်ဆိုစရာ မရှိပေမယ့် အဲ့ဒီ့ ရုပ်တုဝတ်ထားတဲ့ အတွင်းခံကတော့ Wellesley ကောလိပ် ကျောင်း သူတွေကို နည်းနည်းတော့ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Wellesley ကောလိပ် (အမျိုးသမီးကျောင်း) ကျောင်းအုပ်ကတော့ “အဲ့ဒီ့အပိုင်းက ပညာသားပါတယ်။” လို့ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မီးပွိုင့်များတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့လာသည့် လမ်းကြောင်းအား အလိုအလျောက် မီးပွိုင့်စိမ်းပြီး ယာဉ်လမ်းကြောင်း ရှင်းလင်းသည့်စနစ် တပ်ဆင်မည်
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့လာသည့် လမ်းကြောင်းများအား အလိုအလျောက် မီးပွိုင့်စိမ်းကာ ရှင်းလင်းသည့်စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသော ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ (ဓာတ်ပုံ-အောင်မျိုးသန့်)
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ယာဉ်ကြောများ ပိတ်ဆို့နေသည့် မီးပွိုင့်များအားလုံးတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့လာသည့် လမ်းကြောင်းများအား အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပြီး မီးပွိုင့်စိမ်းကာ လမ်းကြောင်းရှင်းပေးသည့် စနစ်ကို တပ်ဆင်သွားရန် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်က ပြောကြားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မီးပွိုင့်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့လာသည့် ယာဉ်လမ်းကြောင်းအား အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပြီး မီးပွိုင့်စိမ်းပေးကာ ယာဉ်လမ်းကြောင်းရှင်းသည့် စနစ်ကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၌ စတင်စမ်းသပ်တပ်ဆင်ထားသည်။
“ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံမှာ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းလာတဲ့ လမ်းကြောင်းကို အလိုအလျောက် မီးပွိုင့်စိမ်းပြီးတော့ လမ်းကြောင်းရှင်းတဲ့စနစ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ဂျိုက်ကာအဖွဲ့က ရှစ်လလောက် လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတော့မှ ဒီစနစ်ကို စမ်းသပ်ပြီးတော့ အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ အောင်မြင်မှုရှိတဲ့အတွက် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ မီးပွိုင့်လမ်းဆုံတွေ အားလုံးမှာ တပ်ဆင်သွားဖို့ ဂျိုက်ကာအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါပြီ။ မကြာခင်မှာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မီးပွိုင့်ရှိ လမ်းဆုံစုစုပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ရှိကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး (ရန်ကုန်)မှ သိရသည်။
မကြာခဏ နုံးချည့်ညောင်းညာ တတ်သူတို့ စွမ်းအင်တိုးစေမည့် နည်းများ
မကြာခဏ နုံးချည့် ညောင်းညာပြီး ပင်ပန်း သလိုလို စွမ်းအင် မရှိသလိုလို ဖြစ်နေ ပါသလား။ ရိုးစင်းတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကို ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ရုံနဲ့ သင့်ဘဝမှာ စွမ်းအင်တွေ ပြန်ရှိ လာပါလိမ့်မယ်။
ရေဓာတ် ခန်းခြောက်မှု ဖြစ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်စွမ်း ကျစေတာကြောင့် နုံးချည့်ပင်ပန်း နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခဏ ရေသောက် ပေးရပါမယ်။
တစ်နေ့မှာ ကဖင်းပါတဲ့ အရည် (ဥပမာ- ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ကိုလာ) တို့ကို တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက် သောက်တာက စွမ်းအင်တိုးစေပြီး စိတ်ရွှင်လန်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကဖင်းဓာတ်ကို များများမှီဝဲတာ (ဥပမာ- တစ်နေ့ ခြောက်ခွက်ခန့်) က ရင်တုန်တာ၊ ကတုန်ကယင် ဖြစ်တာနဲ့ သက်လုံ ကျဆင်းတာ တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နံနက်စာကို မှန်မှန်စားတာက ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ လောင်စာအဖြစ် ဂလူးကို့စ်ပေါ်မှာ မူတည်နေတဲ့အတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် များများပါတဲ့ နံနက်စာကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ အစာမစားဘဲနေရင် သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေတာကြောင့် နုံးချည့်နွမ်းနယ်မှု ဖြစ်လွယ် ပါတယ်။
ကောက်နှံ တစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့အစာ (ဥပမာ- ဆန်လုံးညို၊ ခေါက်ဆွဲညို)၊ အဆီနည်းနို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ အဆီနည်းအသား၊ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို များများစားရင် အာဟာရ ပြည့်ဝစေပါတယ်။ အဆီ၊ သကြားနဲ့ ဆားများတဲ့ အစာတွေကို လျှော့စားပါ။ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ သံဓာတ်ချို့တဲ့မှုဖြစ်ရင် နုံးချည့် ညောင်းညာတတ်တာကြောင့် အဆီ နည်းအသားလို သံဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစာ စားပေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ညကို ရှစ်နာရီလောက် အိပ်ချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ အိပ်စက်ချိန်မှာလည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့ လိုပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ ရောက်တဲ့အခါ ပူပင်စရာ အတွေးတွေကို မေ့ပစ်ပြီး ဝင်လေ ထွက်လေ မှတ်တာ၊ ဘုရားစာရွတ်တာတို့နဲ့ အပန်းဖြေကာ အိပ်စက် အနားယူပါ။
အိပ်ဆေးတွေက အိပ်မပျော်တဲ့ ဝေဒနာအတွက် ရေရှည်ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆေးတွေက အိပ်မပျော်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကုသတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာကြောင့် အိပ်မပျော် ရတာလဲ ဆိုတာ အဖြေရှာပါ။ အိပ်မပျော်ဘဲ နုံးချည့် ညောင်းညာ နေရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
”နယ်ခံ ပရိသတ်တွေက ကိုယ့် အတွက် အထူး အဆန်း ဖြစ်သလို ရိုက်ကူးရေး အနေနဲ့လည်း ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါ တလေ ပျော်လွန်းလို့ မျက် ရည် တောင် ကျမိတယ်”ဟု ခင်ဝင့်ဝါ က ပြောသည်။
ပထမဆုံး နယ်ရိုက် ကွင်းမှာ ရလာတဲ့ အသိကတော့ နယ်ခံ ပရိသတ်တွေက ရိုးသားပြီး ပွင့်လင်း ကြကြောင်း ခင်ဝင့်ဝါ က ပြော သည်။
ခု လတ်တလောမှာ ခင်ဝင့်ဝါက ရေစကြို၊ ပခန်းကြီး၊ ပခုက္ကူနဲ့ ပုဂံ ဘက်မှာ ‘ကျွန်တော့် ရည်းစား ဘုရား မှာနေသည်’ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ပန်းချီစိုးမိုး၊ စိုးရန်အောင်၊ မိုးယုစံတို့နှင့် အတူ သွားရောက် ရိုက်ကူးနေကြောင်း သိရသည်။
ခင်ဝင့်ဝါက The Beauties Concept Website တွင် Most Beautiful Girl of the year 2013 နံပါတ် ၆ အဖြစ် ရွေးချယ် ခံရ သလို Global Beauties Website တွင် Miss Grand 2013 နံပါတ် ၅ စာရင်းတွင် ပါဝင်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
”ခင်ဝင့်ဝါ ဆိုတာထက် မြန်မာ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အလှမယ် ခင်ဝင့်ဝါ အနေ နဲ့ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲ တစ်ခုမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြု ခံရတဲ့အထဲ မှာ ပါဝင်ခွင့် ရတဲ့ အတွက် ပျော်ရွှင်မိတယ်”ဟု ခင်ဝင့်ဝါ က ပြောသည်။
ပန်းသီး ဖျော်ရည် ပုံမှန် သောက်သုံးလျှင် အရေပြား တွန့် ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်
ယမန်နေ့က ၂၉နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည့် ရီးရဲလ်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒို ကို အီဘရာဟီမိုဗစ်က Nike အမှတ်တံဆိပ်
အင်္ကျီတစ်ထည်ကို တွစ်တာမှတစ်ဆင့် မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ အင်္ကျီတွင် ဇလာတန်ကို ယှဉ်ပြိုင်ရဲလားဆိုသည့် စာသားရေးသားထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အီဘရာဟီမိုဗစ်နှင့်
ရော်နယ်ဒိုတို့မှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်အဆင့် ခြေစစ်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက်များအဖြစ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆုကို မိမိသာရသင့်သည်ဟု အီဘရာဟီမိုဗစ်က ဝေဖန်ခဲ့ဖူးသည်။
သို့သော် ရော်နယ်ဒိုက အီဘရာဟီမိုဗစ်၏လက်ဆောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ တုံ့ပြန်သွားသည်။ “မင်းရဲ့လက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးတင်
ပါတယ်။ အဲဒီလက်ဆောင်က ငါ့အတွက် မင်းထင်ထားတာထက် ပိုကောင်းနေတယ်”ဟု တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြောကြား ထားသည်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်၏ ၃၃နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၃ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ရော်နယ်ဒိုအနေဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ပြတိုက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ဖွယ်ရှိနေကြောင်း သတင်းများက
ဆွမ်းကွမ်းကိစ္စ မကျေနပ်၍ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်၏ တူမကို ရဟန်းတစ်ပါးက ဓားဖြင့်ထိုး
တောင်ငူ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့နယ်တွင် ဆွမ်းကိစ္စ အဆင်မပြေ၍ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်၏ တူမဖြစ်သူကို အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ရဟန်းတစ်ပါးက ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲတွင် ဓားမြှောင်ဖြင့် ထိုးခဲ့ကြောင်း တောင်ငူမြို့နယ် အမှတ် ၁၃ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
တောင်ငူမြို့နယ် အမှတ် ၁၃ ရပ်ကွက် ဦးမှန်းလမ်းနှင့် ဈေးလမ်းထောင့်ရှိ နေရှင်နယ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် အထက်ပါ ဓားထိုးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ အသက် ၃၁ နှစ်၊ ဝါတော် ၂ ဝါခန့်ရှိ လူအမည် ဖိုးချမ်း (ခ) ဦးကုသလသည် ဈေးရောင်းချပြီး ပြန်လာကာ ဈေးဆိုင် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းနေသူ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုးကို ညနေပိုင်း၌ စကားပြော အဆင်မပြေ ဖြစ်ထားသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အငြိုးထားကာ ကျောင်းတိုက်ရှိ ဆွမ်းစားဆောင်တွင် အရိုးအသွား ၉ လက်မခွဲခန့်ရှိ စတီးဓားမြှောင်ဖြင့် လေးချက်ခန့် ဝင်ရောက် ထိုးနှက်ခဲ့ကြောင်း တောင်ငူမြို့နယ်၊ အမှတ် (၂) ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ သိရသည်။
“ဆွမ်းကွမ်းကိစ္စ အဆင်မပြေတဲ့ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ ရဟန်းက ကျောင်းထိုင်ရဲ့တူမကို နဂိုကတည်းက မကျေမနပ် ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီနေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ ကျောင်းထိုင်နဲ့ ဦးကုသလ စကားများတာကိုလည်း မြင့်မြင့်စိုးက ဘုန်းကြီးကို ပြန်မပြောဖို့ ဝင်တားတာကိုလည်း မကျေနပ်လို့ လုပ်လိုက်တာပါလို့ တရားခံက ဝန်ခံတယ်” ဟု အမှတ် ၂ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး၏ တူမတော်စပ်သူ ဓားနှင့်အထိုးခံရသူ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုးသည် ဦးခေါင်း နောက်စေ့ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ ကျောကုန်း ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ယာလက်မောင်း ပြတ်ရှဒဏ်ရာများဖြင့် တောင်ငူ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို ပို့ဆောင် ကုသထားရကာ ဒဏ်ရာအခြေအနေ စိုးရိမ်ဖွယ် မရှိကြောင်း တောင်ငူမြို့နယ် အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်ငူမြို့ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ရွှေညာမြေလမ်းနေသူ၊ အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ၂ နာရီခန့်တွင် ဓားဖြင့်ထိုးသည်ဟု တိုင်ကြားခံရသူကို တောင်ငူမြို့နယ် သံဃနာယက အဖွဲ့ထံ ပို့ဆောင် လူဝတ်လဲစေပြီး တောင်ငူမြို့နယ် အမှတ် (၂) ရဲစခန်းက (ပ)၃၅/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၂၆ (အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု) ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားသည်။
လာမည့် ၁၀ နှစ်တွင် မြေအောက်ရထားနှင့် ကောင်းကင်ရထား ပြေးဆွဲမည်
ကာလလတ် စီမံကိန်းအဖြစ် လာမယ့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်လောက်ရောက်ရင် ရန်ကုန်မှာ မြေအောက်ရထားနဲ့ ကောင်းကင်ရထား ပြေးဆွဲနိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်မယ်လို့ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးက ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးအတွင်း ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေမူကြမ်း ဆွေးနွေးစဉ် သူက ခုလို ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရထားလမ်းပိုင်းတွေဟာ ၁၀ ကီလိုမီတာကျော် ရှည်လျားမှာ ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဂျပန် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်မှု အေဂျင်စီ (ဂျိုက်ကာ)တို့ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲတာလို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
လောလောဆယ် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ဆိုးရွားနေတဲ့ ရန်ကုန် – မန္တလေး လမ်းပိုင်း ပြုပြင်ဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက အိုဒီအေချေးငွေ အကူအညီ ရယူထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
မြန်မာ့အဖိုးတန်ဝါးများကို စနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မပြုလုပ်နိုင်ပါက မကြာမီပျောက်ကွယ်နိုင်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက် ပိုင်းသည် သစ်တော၊ ဝါးတောများ ပေါများရာဒေသဖြစ်ရာ သစ်ခုတ်သူ၊ ဝါးခုတ်သူများအနေဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရာအလုပ်အကိုင် တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းမှုမပြုနိုင်လျှင်
တောတောင် များမကြာမီ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင် ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
သစ်တွေကိုတော့ ဒေသခံတွေ ခုတ်တာနည်းပါတယ်။ မခုတ်ဖူး လို့တော့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီတွေခုတ်တာက တစ်ရက် ကို တန်ပေါင်းများစွာခုတ်နေတာပါ။ ဟိုအရင်တုန်းကဆို ဒီတောထဲမှာ လူနှစ်ယောက်ဖက်သစ်ပင်တွေ ဆိုရင် ရေတွက်လို့တောင် မကုန် နိုင်ပါဘူး။ ခုတော့ ဒီလိုသစ်ပင်မျိုး မရှိသလောက်ရှားသွားပါပြီ။ ဝါး တွေဆိုလဲ တစ်ရက်တစ်ရက်ကို ကားနဲ့တိုက်နေကြတာမနည်းမနော ပါပဲ။ နောက်ပြီး ချင်းတွင်းမြစ် အတိုင်းဝါးဖောင်တွေဖွဲ့ပြီး အောက် ပိုင်းဒေသတွေကို ပို့ပေးနေကြတာ ဝါးဖောင်တစ်ဖောင်ကို ဝါးလုံးရေ သိန်းဂဏန်း
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါ တယ်''ဟု ကလေးဒေသခံတစ်ဦး ကပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ပညာရှင် ကြီးများက ဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ ဝါးမျိုးစိတ်ပေါင်း
တစ်ထောင်ကျော် ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားကြ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝါးမျိုးပေါင်း ၁ဝဝကျော်ရှိပြီး မျိုးကွဲ ၁၈မျိုးရှိ သည်။ ထိုသို့တန်ဖိုးရှိလှသော ဝါး များကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ် နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများ က ပြောကြသည်။
UNITY ဂျာနယ်ဝိုင်းတော်သား ၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကိစ္စ အစိုးရ ရှင်းလင်း
UNITY အပတ်စဉ် ဂျာနယ်ပါ လျှို့ဝှက် ဓာတုလက်နက် စက်ရုံဆောင်းပါးကြောင့် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်း အရေး ယူ မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့အသံက ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုနဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန က ဖော်ပြချက် ကို
ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်ထုတ် Unity စာစောင် အတွဲ (၃)၊ အမှတ် (၄) တွင် အမှတ် (၂၄) ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း စက်ရုံအား လျှို့ဝှက်ဓာတုလက်နက် စက်ရုံခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း နှင့်တစ်ကွ ဖော်ပြထုတ်ဝေခဲ့ သည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ယင်းဖော်ပြထုတ်ဝေချက်သည် နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ပေါက်ကြားစေခြင်း၊ စက်ရုံ၏ တားမြစ်နယ်မြေအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ကျော်ဖြတ်ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်းတို့ကြောင့် သတင်းရေးသားပေးပို့သူနှင့် ဂျာနယ် တိုက်တာဝန်ရှိသူအား စုံစမ်းအရေးယူပေးရန် ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန က ပေါက်မြို့မ ရဲစခန်းသို့ တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် (ပ) ၈/၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံလျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၁)(က) /၉ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထိန်းသိမ်းထားသူများမှာ ပေါက်မြို့နေ ဦးလူမော်နိုင် (ခ) လင်းကျော်ဦး(ခ) လူမော်၊ ၂၄ နှစ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်
တောင်ပိုင်းမြို့နယ်နေ ဦးတင်ဆန်း ၅၂ နှစ်၊ ဖျာပုံမြို့နေ ဦးစည်သူစိုး ၂၂ နှစ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ဦးသဲရာဇာဦး(ခ) ရာဇာဦး(ခ) ကိုသဲ ၂၈ နှစ်နှင့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် နေ ဦးအောင်သူရ (ခ) ပိုင်သက်ကျော် ၂၅ နှစ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အမှုအားစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ဥပဒေနှင့် အညီ တွေ့ဆုံ ခွင့်ပြုထားကြောင်း
ပြည်တွင်းကို ရောက်နေတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့ကနေ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့အထိ အခွန်ကောက်ခံပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးမယ်လို့ ကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုငျး ဟသင်ျတွာမို့တှငျ လိုငျစငျလာလုပျသညျ့ ဆိုငျကယျမြားအဖွဲ့ပေါင်းစုံ စုပေါင်းပြီး One Stop Services ပုံစံ လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ကာလ တန်ဖိုးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အကောက်ခွန်နဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးရမယ်။ ကျန် မှတ်ပုံတင်နဲ့ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် ကျပ် ၂ သောင်းကျော်ကျသင့်မယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစိုးရဟာ ပြည်တွင်းရောက်နေတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် ၃ သန်းနီးပါးကို ၈ ကြိမ် လိုင်စင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာဝန်းကျင်လောက် ရောက်ရင် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကတ်ပေါင်း သန်း ၃၀ ကျော် စ ရောင်းပေးမယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လိုင်စင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ တယ်လီနောဂရုဖ်ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အာရှဒေသအကြီးအကဲ မစ္စတာ ဆစ်ဂ် ဘရစ်ကီး (Mr. Sigve Brekke) က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
cardဆင်းကတ်တွေကို စပြီး ရောင်းပေးပေးမှာဖြစ်သလို အင်တာနက်ပါ သုံးလို့ ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
အင်တာ နက် မြန်နှုန်းမြင့်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး မှာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံပိုင် ဆက်သွယ်ရေးဌာနဆီက ငှားရမ်းသုံးစွဲမယ်၊ နောက်ပိုင်း စာချုပ်ပါ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း ကိုယ်ပိုင် International Gateway တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တယ်လီနော မြန်မာဟာ လာမယ့် ၅ နှစ်အတွင်း လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ အဲဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ တုန်းက ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး တစ်မိနစ်မကြာပဲ ကွာရှင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးဖြစ်သူရဲ့ ဖခင်ဟာ သမီးလေး အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ အလုပ်ရာထူး တစ်ခု ပေးမယ်လို့ ဆိုထားတာကြောင့် သူ့အတွက် မိတ်ဆွေအမျိုးသားက ကူညီပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တရားရုံးမှာ မင်္ဂလာဆောင် လက်မှတ်ထိုးပါ တယ်။ ပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ ရုံးဘေးက တရားရုံးမှာ ကွာရှင်း လက်မှတ် အတူထိုးကြ ပါတယ်။ ယင်းအတွက် ကြာမှာ ကြာသွားချိန်က တစ် မိနစ်တောင် မပြည့်ပါဘူး။ စက္ကန့်ပိုင်းသာ ကြာပြီး လက်ထက် စာချုပ်က မင်တောင် မခြောက်သေးတဲ့အချိန်မှာ ကွာရှင်းစာချုပ် ပေါ် လက်မှတ် ထိုးခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ယူအေအီးက ယင်း ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိမ်ထောင်ဟာ ကမ္ဘာ့ သက်တမ်း အတိုဆုံး အိမ်ထောင်အဖြစ် ဂင်းနစ် စံချိန် တင်စေခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
လယ်စောင့်တဲအတွင်း အိပ်ပျော်နေစဉ် ဆင်များနင်း၍ လူတစ်ဦး သေဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ငပုတောမြို့နယ် ဇီးချိုင့်အုပ်စု ဖုန်းဆိုးကြီး လယ်တောရှိ စပါးတလင်း၌ တောဆင် ရိုင်းများ ဝင်နင်းသဖြင့် အိပ်ပျော်နေသူ လူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ယမန်နေ့ နံနက် ပိုင်းက ဦးမြင့်လှိုင် ၄၄ နှစ် (ဘ) ဦးတင်ဆိုင်သည် ဇီးချိုင့်ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၅ မိုင်ခန့် အကွာ ဖုန်းဆိုးကြီး လယ်တောအတွင်း စပါးတလင်း လယ်စောင့်တဲ၌ အိပ်ပျော်နေစဉ် တောဆင်ရိုင်းများ ဝင်ရောက် နင်းချေ ဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် ဦးမြင့်လှိုင်မှာ ဦးခေါင်း ပျောက်ဆုံးပြီး ခန္ဓာကိုယ် တစ်စစီ ပြုတ်ထွက်၍ သေဆုံး သွားသည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်ကို အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြား လယ်လုပ်သားများက ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းရွှေထံသို့ အကြောင်းကြားကာ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ ဟိုင်းကြီးနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် လှထွန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး သေဆုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများအား အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ၌ပင် မီးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(နိရဉ္စရာ- ၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၄)
Facebook အလွန်သုံးစွဲခြင်းသည် သစ္စာမရှိခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် ဟုသိရ
ဖေ့ဘုတ် အလွန်အကျူးသုံစွဲခြင်းအပေါ် လေ့လာမူတစ်ရပ်ကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဆိုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ " ကျမဒီဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ရှိနေလေလေ သူအဲဒီအပေါ်မှာ တွေ့မြင်သွားမှာ စိုးရိမ်လေလေ။ သံသယစိတ်တွေသိပ်လွန်ကဲနေခဲ့တယ်လေ " လို့ Kate Wise ဆိုသူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
" သူတို့အမြဲပြောတယ် ဒီအရာလေးဟာ ရွေးချယ်မူ အရာတွေအားလုံးရဲ့ လွတ်လပ်မူ လေးတစ်ခုပါတဲ့ "
" ထိုရွေးချယ်မူကို ပြုလုပ်ပြီး ချိန်မှာတော့ ဒီအရာဟာ လွယ်ကူတဲ့ အရာတစ်ခု မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရှိခဲ့ရပါတယ်"
အခု Facebook ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို သိပ္ပံပညာအားဖြင့် အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ၊ လူအပြုအမူ၊ ဆိုရှယ် နက်ဝက်ဘ် ဂျာနယ်တွေမှာ လေ့လာမူတစ်ရပ်က အဆိုပါ ဖေ့ဘုတ်သက်ရောက်မူ အကြောင်းကို ရေးသား ဖြန့်ဖြူး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ပြောကြားချက်အရ Facbook ပေါ်မှာ အချိန်ကြာကြာ အချိန်ဖြုန်းလေလေ သင့်တို့ရဲ့ မျက်စိတွေဟာ ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရောက်ရှိလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ယောကျာင်္းလေးနဲ့ မိန်းကလေးတေတွေ့ဖို့ အချိန်းအချက်ပိုမိုရရှိစေကာ ဖောက်ပြားဖို့အတွက် လမ်းစတွေ ရှိလာတာကို ဖြစ်ပါတယ်။
CBS လော့အိန်ဂျလစ်ရဲ့ သတင်းအရ ချစ်သူတွေနဲ့ ခင်ပွန်း (သို့) ဇနီးသည်တွေဟာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ်က ဖော်ပြချက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပါတနာ( လက်တွဲဖော်) ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မူကိုခံစားနေရပါတယ်။ လို့သိရပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်နဲ့အတူ ပြန်လည်ဆက်သွယ်မူ လိမ်ညာမူတွေနဲ့ အဓိက ဖျားယောင်း မူတွေထဲမှာ တစ်ခု ဖြစ်လို့ပါပဲ။ မိတ်ဆွေတို့၏ လက်တွဲဖော်ရဲ့ သတိပေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မှာ ဖြစ်ပြီး အကြောင်းကတော့ ဖေ့ဘုတ်ဟာ ထိုသို့အရာတွေအားလုံးကို သိစေနိင်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Relationship ကို ပြိုကွဲစေပါလိမ့်မယ်။
ဖေ့ဘုတ်ဟာ နောက်ဆုံးသစ္စာရှိတဲ့ လူသတ်သမားပါလို့ တစ်ယောက်သောသူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်းဖေ့ဘုတ်ဟာ (ပုန်းကွယ်နေတဲ့ သစ်သီး )နောက်တစ်ယောက်ကို ငြိတွယ်နိင်အောင် ကူညီပေးနိင်တယ်လို့ မြင်နေရပါတယ်။ ထို ကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ပညာရူထောင့်မှ လေ့လာချက်အရ ထိုဖြစ်ရပ်များသည် အနည်းငယ်သော Like လုပ်ခြင်း၊ Chat Box , Comment Box တို့မှ ပရောပရိလုပ်ခြင်းတို့မှ စတင်နိင်ကြောင်း၊ မီးတောက်နဲ့တူသော ပျက်စီးထိခိုက်နစ်နာမူများကို မြင်ရတဲ့ အချို့ အရာတွေ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ နောက်ကျနေတဲ့ညအခါမျိုးတွေမှာ နာမည်သိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဖေ့ဘုတ်မှာ ရှာပြီး Bang Bang လုပ်ရက အစပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ Bang Bang နဲ့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဟာ သေဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ တကယ်ပဲ သစ္စာမရှိမူတွေကို ဧကန်ဖြစ်စေမှာလား ?
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာ Facebook ပေါ်က ကျတော်တို့ရဲ့ ယိုယွင်းမူတွေကိုမကြည့်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်ကို စိတ်ချလက်ချနေနိင်ဖို့အတွက် သူတို့မရှိဘဲ ပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်နေနိင်မှာလား ဆိုတာ တွေးဖို့ရှိပါတယ်။ ဂုဏ်ကျက်သရေတွေအတွက် Club ထဲက ဘားတန်းဒါး တစ်ယောက်လို သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးတင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ Update တွေကို မကြည့်ပဲနဲ့ လေ။ ကျတော်တို့ အဲဒီလို လုပ်ကြမလား ? ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်မှာလည်း ရပ်တည်မူနှစ်ခု အတွက် ( ငါးနှစ်ကောင်ဖမ်းပြီ) ဥာဏ်ကောင်းစွာဖြင့် သူတို့တွေရဲ့ ချစ်သူကို မျက်နှာချိုသွေးပြီး နေနိင်တာပါပဲ။